Umyili wamagqala uChristopher Stringer ushiya iApple | Ndisuka mac
Umyili wezilwanyana uChristopher Stringer ushiya iApple
Utshintsho olutsha kunye nokuhamba ngokwamanqanaba eApple. Emva kweminyaka engama-21 kunye nenkampani, UChristopher Stringer ushiye ikomkhulu laseCupertino. Ikamva lakhe alikacaci kodwa ekugqibeleni wenze esi sigqibo siqatha ngenxa, ebonakalayo, kwiinguqu ezininzi ezenzekayo kwisebe loyilo lwegama laseCalifornia.
I-Stringer ibiluncedo ekuyileni ii-iPhones zokuqala kunye nee-iPads zokuthengisa. Ukwayinxalenye yezilingo kunye namatyala asemthethweni kwinkampani yaseNyakatho Melika enezimangalo phakathi kwayo kunye Samsung, Ukuxhasa injongo ye-apile njengengqina eliphambili.
Kancinci kancinci, iqela loyilo lika-Apple liyothusa. Ukusukela kwiminyaka embalwa eyadlulayo, UJonathan Ive uza kuyeka ukulawula iqela, isebe lakhe lakudala, uninzi lwabayili bemizobo Isitshixo sokunyuka kweApple ngokufika kwe-iPhone kunye nempumelelo elandelayo yentengiso ye-iPad ihambile.
Iqela elidala loyilo lweApple, kunye noChritopher Stringer kwibhanki yethu yasekhohlo, kunye noJony Ive embindini.
UChristopher Stringer ngoku wenza into ebisenziwa ngoontanga bakhe ngaphambili. Nangona singazazi ngqo izizathu ezikhokelela koku, siyabona ukuba ayisiyodwa le nto. Umyili wegqala uyishiya inkampani yaseCupertino emva kweminyaka engama-21 yenkonzo.
Eli sebe, elikhokelwa ukusukela ngoko nguRichard Howarth, umntu othembekileyo we-Apple CEO uTim Cook, wenze utshintsho oluninzi. KUNYEObu bunkokeli butshintsha buthintele abanye babaqulunqi abakwinqanaba likaApple abagqiba ekubeni bayishiye inkampani.
Umzekelo, umyili uDanny Coster washiya uApple kunyaka ophelileyo wajoyina iqela loyilo leGoPro. Asazi ncam ukuba yintoni enokwenzeka kwinqanaba langaphakathi Ukusuka kwikomkhulu laseCupertino, kodwa masithembe ukuba abayi kuqhubeka nokuhlupheka ngenxa yokuntywila kwengqondo okungalawulwayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umyili wezilwanyana uChristopher Stringer ushiya iApple
UApple uthi siza kuba neMacac entsha kulo nyaka
Ukuphuculwa kweMac Pro kunye nemodeli entsha ka-2018 kuyaqinisekiswa